५ बर्ष भित्रमा जनताले चाहे अनुसारको काम हुन्छ - AahaSanchar
Home आहा टक ५ बर्ष भित्रमा जनताले चाहे अनुसारको काम हुन्छ
५ बर्ष भित्रमा जनताले चाहे अनुसारको काम हुन्छ
केदार बिष्ट, ३ नम्बर वडा अध्यक्ष । सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम
तपाई हिजो आज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
जनताकै काममा व्यस्त भईरहेको छु । दैनिकि १० वजे देखि ४ वजे सम्म ३ नं वडाका जनताकै काम गर्नमै व्यस्त छु ।
दैनिक जनताको काममा ब्यस्त भन्नुभयो, तपाई वडाध्यक्ष भईसकेपछि गरेका महत्वपुर्ण के कस्ता छन ?
वडाध्यक्ष भईसके पछि धेरै काम गरेको जस्तो लागेको छ । यस आर्थिक बर्षम २८ ओटा योजनाहरु रहेका थिए हाम्रो वडामा । जसमा १२ ओटा योजनाहरु कार्यान्वयन भईसकेका छन भने ८ ओटा योजनामा निरन्तर काम भैरहेका छन । जसमा सडक, खानेपानी, सिचाई, बिद्युत, खेलकुद र मैदान मुहान संरक्षण आदी भैरहेका छन । सानीभेरी गाउपालिकाको सबै भन्दा बढि राजस्व संकलन गर्ने वडापालिका ३ नं वडा भएको छ । कार्यालयबाट लिईने बिभिन्न सिफारिसलाई पनि सहज रुपमा जनतालाई प्रदान भैरहेको छ ।
सडकमा भन्ने हो भने, झिन्चौर, भलाचौर सडक खण्ड निर्माण भएको र बल्याखर्क, गोल्डाँडा, अध्याचौर र सडक खण्ड निर्माणधिन अबस्थामा रहेको छन ।
खानेपानी तिर हेर्ने हो भने नाउलीखोला अध्याचौर गराईला गाउँ खानेपानी आयोजना निर्माणधिन अबस्थामा छन । त्यस्तै गुमाखोला भलाचौर निर्माणधिन अबस्थामा देउताखोला, झिन्चौर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको र सल्ली चौर रातामाटा खानेपानी आयोजना निर्माधिन अबस्थामा छ भने खानेपानीको काम सबडिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट भैरहेको छ ।
भौगोलीक दृष्टीकोणले अन्य वडा भन्दा विकास गर्न यहाँ केहि जटिल देछिन्छ, कसरी ब्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
भौगोलीक दृष्टीकोणले सबैभन्दा ठुलो यो वडापालिका भएकोले गाउपालिकाबाट सबैभन्दा बढि बजेट बिनयोजित भएको छ र हाम्रो प्रमुख ध्यान शिक्षामा भएकोले बेलटापु बिद्यालयको स्थर उन्नतिको लागी वडाकै सबैभन्दा बढि रकम बिनियोजित गरेका छौं । गोल्डाँडा बिद्यालय, ज्यामीरेको बिद्यालय र बाल सञ्जालहरुको स्थर उन्नती को लागी बजेट बिनियोजीत गरेका छौ र ३ न. वडामा उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नको लागी रकम बिनियोजीत गरेका छौ । एकैबर्ष सबै बिकास निर्माण हुन गाह्रो छ, आगामी ५ बर्ष भित्रमा जनताले चाहे अनुसारको काम हुन्छ । शिक्षामा थोरै भए पनी परिवर्तढा गर्ने छु । अबको २ वर्ष भित्र प्रत्येक ठाउमा सडक सञ्जालले जोड्ने छु ।
उप स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्ने छु अबको १ बर्ष भित्र ३ नं वडाको सम्पूर्ण घर घरमा विद्युतको व्यवस्था गर्नेछु । अबको २ बर्ष भित्र यस ३ नं वडाका सम्पूर्ण जनताको घरमा एक घर एक धारा खाने पानी ल्याउने छु ।
म के भन्न चाहान्छु भने वडापालिकाको मुख्य ध्यान युवाहरुलाइ रोजगारी दिने छ र स्वदेशमै रोजगार को व्यबस्था गर्ने छु । यस ठाउमा केही विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाएर युवाहरुलाइ रोजगारको व्यवस्था गर्ने छु । अनी संघियता कार्यन्वयनमा जोड दिने छु ।
प्रस्तुती ः छबिलाल बिष्ट
Previous articleरुकुम पुर्ब र पश्चिममा शान्तिपुर्ण तरिकाले परिक्षा, फोटो
Next articleआहा गजल : दिनेश पुन
अस्पताल मार्फत प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गर्ने योजना छ
बाँफिकोट गाउँपालिकाद्धारा ९ वटा ऐन पारित
शान्तिको ‘मौन विद्रोह’मा समाज
aahasanchar - March 6, 2018
आहा टक : हरीभक्त भण्डारी
aahasanchar - February 24, 2018